YEYINTNGE(CANADA): Friday, August 19
စက်သုံးဆီ ဓာတ်ဆီစာအုပ်တွေ ပုဂ္ဂလိက ပေးလိုက်တော့ သက်တမ်းတိုးဖို့ မလိုဘူး ထင်ခဲ့တာ တက်တက်စင်အောင် မှားသွားပါပြီ..
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆီစာအုပ်များကို သက်တမ်းတိုးဖို့ ရန်ကုန် ကုန်သည်ကြီးများနဲ့ စက်မှု့လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှာ သွားလုပ်ဖို့ ဆီဆိုင်က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်.. ၉နာရီလောက်သွားလိုက်တော့ အရင်စာအုပ်ထပ်ရတယ်ဗျ.. ကိုယ့်အမှတ်စဉ်က ၆ဝကျော်နေပြီ.. စာအုပ်တွေကို ထပ်ပြီး ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ စာရွက်စုတ်လေးမှာ. နာမည် အမှတ်စဉ် ယာဉ်နံပါတ်ရေးရတယ်ဗျ.. နောက်.. လိုတာလေးတွေ Copy ကူး (လိုတာတွေက.. ယာဉ်ပိုင်ဆိုင်မှု့စာအုပ်မူရင်း မိတ္တူ.. ဘီးခွန်မူရင်း မိတ္တ္တူ.. မှတ်ပုံတင်မူရင်း မိတ္တူ) အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့
နောက်သွားထပ်ပြီး ကပ်ထားတဲ့စာတွေဖတ်လိုက်တော့ လန့်သွားတယ်.. စတဲ့ အချိန်က ၁ဝနာရီခွဲမှတဲ့.. ပထမဆုံးရောက်တဲ့လူက ပြောတယ် သူက မနက် ၆နာရီထဲက စောင့်နေတာပါတဲ့..
၁ဝနာရီခွဲ ကောင်တာဖွင့် တိုကင်ပေး တိုးကြိတ်ပြီး ယူနေရတယ်.. မိုးကရွာ ထီးကမလုံ.. ဖြစ်ပျက်နေတာ.. ထိုင်စရာမရှိ ရပ်စရာနေရာကမရှိ.
တိုကင်လေးယူပြီး သူကခေါ်တယ်.. ပြီးတောင်းတာလေးပြ ထပ်စောင့် ၁ နာရီလောက်. နောက်မှ.. ဆီစာအုပ်လေး ထွက်လာမှာ သက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်..
မြန်မာပြည်မှာ တန်းစီတိုးကြိတ်ရတာ တော်တော် ခေတ်စားတယ်နော်..
သြော်.. ဆီလုပ်ငန်းကို ပုဂ္ဂလိကပေးလိုက်မှ.. ပိုဆိုးပါရော့လားလို့ သာပြောချင်ပါတောတယ်..
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/19/20110အကြံပြုခြင်း
နိုင်ငံတော် ပြန်တမ်းလိုမျိုးမှာတောင် မှားဖြစ်အောင် မှားသေးတယ်...English လိုမှာ ပြည်ပနေ နိုင်ငံသားများကို foreigners living in the nation မှာြး့ပီး ဘာသာ ပြန်ထားလို. ကျွန်တော်တို. ရုံးက foreigner ကို Account က မနဲ ရှင်းပြလိုက်ရတယ်..
မနေ့မနက် ၉း၀၀ နာရီခန့် မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဖိုရမ်တစ်ခုတက်ရောက်ဖို့ 
ဒေါ်စုနဲ့ အတူ ဦးခွန်သာမြင့်၊ ဒေါ်စုစုလွင် (ဦးလွင်ရဲ့ သမီး) တို့လည်း လိုက်ပါသွားပြီး
ဒေါ်စုဟာ အကျီ င်္အ၀တ်အစား အပိုများလည်း ယူဆောင်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပါတီနဲ့ ပက်သက်တဲ့ မော်တော်ယာဉ်နဲ့ မဟုတ်ဘဲ သီးခြား ကားအနက်ရောင်တစ်စီးနဲ့ 
လို့တွေ့ မြင်လိုက်ရသူတစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။
19 August 2011 Yeyintnge's Diary
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးသိန်းစိန် တွေ့ဆုံမှု ရုပ်သံ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြီးရင်နိုင်ငံတော်သမ္မတနေရာစဝ်ရွှေသိုက်၊ ဒေါက်တာဘဦး၊ မန်းဝင်းမောင်၊ဦးနေ၀င်း၊ဦးစန်းယု၊ဦးစိန်လွင်၊ဦးမောင်မောင်ပြီးတာနဲ့ဦးသိန်းစိန်.
ဘေဂျင်းတွင် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေရဲ့ ကျောင်းတွေကို ပိတ်ပစ်
Friday, 19 August 2011 13:34 သုခသခင်
ဘေဂျင်းရှိ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေရဲ့ သားသမီးတွေ တက်ရောက်နေတဲ့ စာသင်ကျောင်းများကို အစိုးရက ရုတ်တရက် ပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
တရုတ်သတင်းဌာနတွေရဲ့အဆိုအရ ခရိုင်သုံးခုမှာရှိတဲ့ ကျောင်းသားပေါင်း ၁၄,၀၀၀ အတွက်တက်စရာ ကျောင်းမရှိတော့ပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်ကတော့ ကျောင်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့ စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ မညီလို့ ပိတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တချို့ကျောင်းတွေကတော့ ပညာရေး စံညွှန်းပြည့်မီကြောင်း သက်သေမပြနိုင်လို့ အပိတ်ခံရတာပါ။
ဒီရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ကလေးတွေဟာ အစိုးရက ထောက်ပံ့ထားတဲ့ ကျောင်းတွေမှာ တက်ခွင့်မရကြပါဘူး။ ဒါဟာ ကလေးတွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သလို ဒါကို အခြေခံပြီး လှုပ်ရှားမှုတွေ စတင်လာနိုင်တယ်လို့ စိုးရိမ်မှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
သန်းပေါင်းများစွာသော ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာ သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်စုတွေကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်လည်း မရသေးပါဘူး။ တကယ်လို့ သူတို့ဟာ မြို့တော်ဆီကို ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်ရင် မှတ်ပုံတင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်မရှိရင် သူတို့ဟာ ပညာရေး ကျန်းမာရေးစတဲ့ အစိုးရက ထောက်ပံ့ထားတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေကို အကျိုးခံစားခွင့်မရကြပါဘူး။
ဒါကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ ကလေးတွေဟာ ဈေးပေါတဲ့ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတွေမှာ ပညာသင်ကြားကြရပါတယ်။ တချို့ကျောင်းတွေဆိုရင် အစိုးရက တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုတာ မခံရသေးပါဘူး။ အစိုးရသတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဆင်ဟွာသတင်းရဲ့အဆိုအရ ဘေဂျင်းရှိ ခရိုင်၃ ခုမှ ကျောင်းပေါင်း ၂၄ ကျောင်းကို နှစ်သစ်တစ်ခု မစတင်မီ ပိတ်ထားလိုက်ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
အပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ကျောင်းတွေထဲမှ ကျောင်းအုပ်ဆရာမတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Xie Zhenqing ကတော့ သူမရဲ့ကျောင်းမှာ တက်ရောက်နေတဲ့ ကျောင်းသားပေါင်း ၁၄၀၀ အတွက် သွားစရာနေရာ မရှိတော့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ် ။
"သူတို့ ဘာအတွက်ကြောင့် ဒီလိုလုပ်တာလဲဆိုတာ ကျွန်မ လုံးဝနားမလည်ပါဘူး။ ကလေးတွေနဲ့ ကျောင်းဆရာတွေအတွက် သူတို့မှာ ဘာအစီအစဉ်တွေကို ရှိလဲဆိုတာ လုံးဝမသိပါဘူး။ ကျောင်းတွေကို ဘယ်အချိန်မှ ပြန်ဖွင့်မှာလဲ ။ အခြားသင့်တော်တဲ့ မူဝါဒတွေရော ရှိလား။ သူတို့ရဲ့ အစီအစဉ်က ဘာလဲဆိုတာ ကျွန်မ မသိပါဘူး။ ဘာကြောင့် ကျောင်းတွေကို ဒီလို ရုတ်တရက်ကြီး ပိတ်ရလဲဆိုတာ ကိုလည်းလုံးဝစဉ်းစားလို့မရပါဘူး" လို့ ဆရာမကြီး Xie Zhenqing က AFP သတင်းဌာနကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပညာရေးဌာနမှ ၀န်ထမ်းတွေကတော့ ကျောင်းတွေဟာ အစိုးရမှ ပြဌာန်းထားတဲ့ အဆောက်အအုံစံချိန်၊ အားကစားကိရိယာပံ့ပိုးမှု အပါအ၀င် အခြားသော ကျောင်းသားတွေရဲ့ လုံခြုံမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ စံချိန်စံညွှန်းတွေမပြည့်မီလို့ အခုလို ပိတ်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အပိတ်ခံရတဲ့ ကျောင်းတွေမှ ကျောင်းအုပ်တစ်ဦးကတော့ ဒီလိုရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ နေထိုင်တဲ့ ကျောင်းကို ဒီလိုစံချိန်စံညွှန်းစေနဲ့ ပြည့်စုံဖို့မျှော်လင့်တာဟာ ယထာဘူတ မကျဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီကျောင်းတွေဟာ ဈေးပေါပေါနဲ့ အများတက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်လို့ပါပဲ။
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကို အကူအညီပေးနေတဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား သူငယ်ချင်းများအဖွဲ့ (Migrant Workers' Friend ) ကို တည်ထောင်သူ Zhang Zhiqiang ကတော့ ဒါဟာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံတာလို့ AFP နဲ့တွေ့ဆုံရာမှာ ထောက်ပြသွားပါတယ်။ ဆင်ဟွာသတင်းဌာနကတော့ လူထုက တရုတ်ပညာရေးစနစ်မှာ မညီမျှမှုတွေကို စိုးရိမ်မှုရှိနေတာကို မီးမောင်းထိုးပြလိုက်တာပဲ လို့ဆိုပါတယ်။
ဇာတ်ပေါင်းခန်းကြီး မဟုတ် ဟုဦးဝင်းတင်ပြော....
Published on August 19, 2011 by နေသွင်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဝင်းတင်က လက်ရှိ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကနေ ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲတွေ အများကြီး ပေါ်နိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဦးဝင်းတင်ကို ကိုနေသွင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်း ထားပါတယ်။
ရန်ပိုင် Friday, 19 August 2011 17:58
နေပြည်တော်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတ ဦသိန်းစိန် တွေ့ဆုံမှုကို မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားက ယနေ့ည ၈း၀၀ နာရီတွင် ထုတ်လွှင့်သွားသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - AP)
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်တော့မည်ဟု ဦးဝင်းတင် မျှော်လင့်
လင်းသန့် Friday, 19 August 2011 15:05
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတော့မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ဦးဝင်းတင်က ပြောလိုက်သည်။
နှစ်ဘက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး အလားအလာကောင်းများ ရှိနေသည်ဟု NLD ခေါင်းဆောင် ဦးဝင်းတင်က ပြောသည်
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးသိန်းစိန်တွေ့ဆုံဖို့ ကိစ္စဟာ ဖြစ်နိုင်ဖို့ အလားအလာ များပါတယ်လို့ ကျနော်တို့ ယူဆပါတယ်” ဟု ဦးဝင်းတင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
မကြာသေးမီက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တို့ နှစ်ကြိမ် တွေ့ဆုံပြီး နှစ်ဘက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပူးတွဲ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ခြင်းထက် ပိုမိုသော ဖြစ်ထွန်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဟု NLD က မျှော်လင့်နေသည်။
“ပြဿနာတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြေရှင်းသွားနိုင်ဖို့က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ပါ ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးဖို့ အဆင့်ထိ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ ပြောချင်တယ်” ဟု ဦးဝင်းတင်က ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ၀န်ကြီးတို့ ဆွေးနွေးပွဲများ၏ ရလဒ်အဖြစ် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွန်းဦး အစရှိသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလည်း မနှေးအမြန် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာမည်ဟု ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါကြောင်း ဦးဝင်းတင်က ဆိုသည်။
ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ၈ ကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့သော ဦးအောင်ကြည်၏ အနေအထားနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များလည်း ပြောင်းလဲသွားပြီဟု ဦးဝင်းတင်က ပြောသည်။ ၀န်ကြီး ဦးအောင်ကြည်သည် သတင်းအချက်အလက် အပြန်အလှန်ပို့ပေးရသူ မဟုတ်တော့ကြောင်း၊ မကြာသေးမီက တွေ့ဆုံမှု ၂ ခုတွင် ဦးအောင်ကြည်သည် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တဦးအဖြစ် တိကျသည့် တာဝန်များ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရှိနေပြီး စစ်မှန်သည့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုပုံသဏ္ဌာန်ဖြင့် သွားနေသည်ဟု နားလည်မိကြောင်း ဦးဝင်းတင်က ရှင်းပြသည်။
သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့က အစိုးရသစ်၏ ပထမဆုံးအကြိမ် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပရာ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းက NLD ပါတီ ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ရေး၊ အစိုးရနှင့် NLD လက်တွဲဆောင်ရွက်ရေးတို့ကို ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ယနေ့နံနက်က အစိုးရ၏ လုံခြုံရေး စီမံပေးမူုဖြင့် သွားရောက်ခဲ့သည်။
ဆွေးနွေးပွဲ ပြင်ပတွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့သည် အလွတ် သဘော သီးသန့် တွေ့ဆုံရန်ရှိကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသည်။
မကြာသေးမီက ဦးသိန်းစိန် ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်းတွင်လည်း ပြည်ပသို့တိမ်းရှောင်နေသူများပြန်လာရန် ဖိတ်ခေါ်မှု ပါဝင်ပြီး နောက်ကျကျန်နေခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံအရေးအတွက် အားလုံးနှင့် လက်တွဲ ဆောင်ရွက်သွားကြရန် တိုက်တွန်းချက်လည်း ပါဝင်သည်။
လာမည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူး အတွက် ကြိုးစားနေသော မြန်မာအစိုးရသစ်က အပြုသဘောဆောင်သည့် အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံမှုများ လုပ်ဆောင်လာသော်လည်း တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော စစ်ပွဲများ၊ စစ်ဘေး ဒုက္ခသည် အရေအတွက် တိုးပွားနေမူများ ကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို ယခုထိ ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ခန့်ကို ပြန်လွှတ်ပေးရေးအတွက်လည်း အစိုးရက ပြောဆိုခြင်း မရှိသေးပေ။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး၊ ဆွေးနွေးရေးတို့အတွက် ပြည်နယ်အစိုးရများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် အမိန့်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မျှော်လင့်ချက် နည်းနေသေးသည်ဟု တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးက သုံးသပ်သည်။
“ခိုင်မာတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျိုးရလဒ် တွေ မတွေ့ရသေးဘူး။ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့လည်း ဗဟိုအစိုးရအစား ပြည်နယ် အစိုးရတွေနဲ့ ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရဖို့ကတော့ မလွယ်သေးဘူး” ဟု အတိုက်အခံများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြု ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးအေးသာအောင်က ပြောသည်။
ဘေဂျင်းတွင် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေရဲ့ ကျောင်းတွေ...